စက်တင်ဘာထာဝရ: 30. Spet., 2011,Daw Aung San Suu Kyi & U Aung Kyi meeting today
30. Spet., 2011,Daw Aung San Suu Kyi & U Aung Kyi meeting today
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကြိုဆိုလိုက်သည်။ယနေ့နေ့လယ်က အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်နှင့် ရန်ကုန် စိမ်းလဲ့ကန်သာ ရိပ်သာတွင် တွ့ဆုံစဉ်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ယနေ့ဦးအောင်ကြည်နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံရာတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရေးကိစ္စ၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စ။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စ၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စရပ်များအား အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရေးသူ စက်တင်ဘာထာဝရ အချိန် 3:12 AM